ZANU-PF Yotsvaga Rutsigiro Kubva Munyika dzemuSADC Mugadziriro yeMusangano weSADC kuNamibia
Zanu PF haina kufara nezvakabuda mumusangano weSADC kuLivingstone izvo zvaita kuti itumire VaJohn Nkomo naVaEmmerson Mnangagwa
ZANU-PF iri kutsvaga rutsigiro kubva kune dzimwe nyika muSADC kwasara mazuva mashoma kuti musangano wekuzeya nyaya yeZimbabwe wevatungamiriri veSADC uitwe muWindoek, kuNamibia.
Musangano weTroika wakaitirwa kuLivingstone, kuZambia, wakapidigukira ZANU-PF pamwe nemutungamiriri wayo uyezve vari mutungamiriri wenyika Va Robert Mugabe.
SADC yakati ZANU-PF inofanirwa kuchinja maitiro ayo emhirizhonga uye kuzadzisa zvayakanyorerana muchibvumirano cheGPA nemapato maviri e MDC.
ZANU-PF haina kufara nezvakabuba mumusangano wekuLivingstone uko SADC yakati ZANU-PF inofanirwa kuchinja maitiro ayo emhirizhonga uye kuzadzisa zvayakanyorerana muchibvumirano cheGPA nemapato maviri e MDC.
Izvi ndizvo zvaita kuti itumira zvikwata zviviri zviri kutungamirirwa nemutevedzeri waVa Mugabe VaJohn Nkomo pamwe naVaEmmerson Mnangagwa, vanowe gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, kuti vataure nevatungamiriri wenyika idzi musangano uyu usati waitwa.
VaSydney Sekeramayi vanga vari kuMozambique vachipirawo nyaya yeZANU-PF. VaSekeramayi vakaita hurukuro naVaArmando Guebuza, vanowe mutungamiriri weMozambique, vachivaudza kuti muZimbabwe mune runyararo kunyangwe hazvo kuchimboitika mhirizhonga yezvematongerwe enyika.
VaMoses Mzila-Ndlovu, avo vanomirira bato reMDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube munhaurirano vati vari kutarisira kuti nyika dzese dzeSADC dzichatevera gwara rakatorwa neSADC Troika rekuisa ZANU-PF pakaoma.
VaNdlovu vati ichi chinhu chisati chamboitika kubva kutanga kwegakava rekutonga pakati peZANU-PF neMDC.
Hurukuro naVa Moses Mzila-Ndlovu